Izindaba - Emuva ku-Edison bulb yokuqala phishekela isibani ebuhleni bomsulwa
Emuva ku-Edison bulb yokuqala phishekela isibani ebuhleni bomsulwa
Ngo-1809, umsunguli we-Englisg uHumphry Davy wadala isibani sokuqala sikagesi. Wayenezinduku ezixhunywe ngamalahle, uhlobo lwe-chemical element carbon, ebhetri enezintambo ezimbili. Yize ukukhanya kungazange kuhlale isikhathi eside, kukhombisile ukuthi ezinye izinto zishise kakhulu ziyakhanya lapho ugesi udlula kuzo. Ngawo-1870, umsunguli waseMelika uThomas Edison wazama isibani sikagesi. Uhlobo lwakhe lwaluyibhokisi lengilazi elivaleke umoya eliqukethe ucingo oluvaliwe, olubizwa ngokuthi intambo, exhunywe ekuhambeni kukagesi okwaziwa njengamanje. Uma umsinga wawunamandla anele, intambo yayikhanya ishisa kamhlophe. Intambo yokuqala ayizange ihlale isikhathi eside, kepha ngo-1879 yakha intambo ehlala isikhathi eside eyenziwe ngekhabhoni.
Abaningi bethu bayayazi le ndaba engenhla, kepha bayazi ukuthi isibani sokuqala sibukeka kanjani.
Yebo, kucishe kube kanjena.
Sizoshicilela iqoqo lemikhiqizo eyingqayizivele ukukwazisa inkumbulo yabasunguli be-bulb abanentambo eguqukayo eholelekile ngaphakathi enikwe amandla ngumshayeli we-DC 24V oholelekile ongenamandla.
Simema abangani bomklami ukuthi benze lolu chungechunge ngobuqotho.
Lapha, ngithanda ukufaka kuhlu izinkomba zokwakha zabaqambi njengereferensi ekubukeni kwemboni.
Umumo wesibani, isibani asikwazi ukuba sikhulu kakhulu, ngoba uma sikhulu kakhulu, isisindo sizoba sikhulu futhi ingwegwe ingilazi mhlawumbe ayikwazi ukuthwala isisindo, ngakho-ke sikweluleka ububanzi bama-bulb hhayi ngaphezu kuka-200mm, futhi hhayi ngaphezulu kwama-300mm.
Izakhiwo ze-intambo eziguquguqukayo, isakhiwo se-intambo esiguquguqukayo singenza noma yisiphi isakhiwo ngendlela ongabona ngayo. Kudingeka ifaniswe kahle nesimo sengilazi.
3.Umbala wengilazi, kungaba yizinhlobo eziningi zemibala eqediwe, njengokucacile, ukubhema kwenhlaka, ithusi, insimbi, uthingo olunemibala, kuphele okuluhlaza okwesibhakabhaka oluhlaza okwesibhakabhaka, ngombala owuhlolile ngemikhiqizo yethu yamanje. ngangokunokwenzeka.
Sihola umkhiqizi wama-decor bulbs, sinolayini wethu wokukhiqiza ingilazi. Ikhono elinekhono lokushaya ingilazi.
Sisezingeni elijulile lemboni yokukhanyisa i-tech, sinomnyango wethu wonjiniyela kagesi nemishini yokuhlola kagesi negumbi lokuhlola.
Ukuqinisekisa nje ukuthi yonke imikhiqizo emisha elandelwayo ilandela ukulawulwa kwe-EU nemithetho yase-US neminye imithetho.
Ubuhle obumsulwa bamalambu yilokho okumele kwenziwe yilo phrojekthi. Sithanda ukuzwa izwi elihlukile. Ngokuqinisekile, siyisisekelo sefektri ye-OEM kuphela eChina, ngakho-ke umbono wakho uyohlala ungowakho njalo. Sisiza ukwenza umdwebo wakho ekukhanyeni okuhle kohlelo lokusebenza oluphakeme.